फिल्म क्षेत्रमो असफल एलिजा ! आकर्षक पहिरनको चर्चा - CNN EXPRESS
फिल्म क्षेत्रमो असफल एलिजा ! आकर्षक पहिरनको चर्चा
माघ १२, काठमाडौं । अभिनेत्री एलिजा गौतम नेपाली फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन संघर्ष गरिरहेकी छन् । बाल्यकालदेखिको अभिनेत्री बन्ने सपना पूरा गर्न पत्रकार ऋषि धमलासँग विवाह गरेपछि उनले घरकै लगानीमा फिल्म ‘अनुराग’ निर्माण गरिन्, तर सफलताको सुख प्राप्त गर्न सकिनन् । पछि उनले पहिलो पटक म्यूजिक भिडियोमा काम गरिन् । उनले अभिनय गरेको पहिलो गीत ‘आधी कपाल’ ले यूट्युबमा उल्लेख्य भ्यूज पाएको छ।
‘अनुराग’ मा उनको जोडी बन्न इन्कार गरेका पल शाहसँग समेत एलिजाले म्यूजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी हुन। आकाश श्रेष्ठ, पुष्प खड्कासँग पनि म्यूजिक भिडियोमा उनको जोडी बाँधिसकेको छ । एलिजाले हालै नयाँ फिल्म ‘घिन्ताङ’ साइन गरेकी छन् । यसमा उनको जोडी अभिनेता गौरव पहारीसँग बाँधिएको छ ।
अचेल उनी कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा पहिरनका कारण सबैको केन्द्रविन्दू बन्ने गरेकी छन् । आइतवार प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विवाह पार्टीमा पनि उनी आकर्षक पहिरनमा पुगेकी थिइन् । श्रीमान र छोरीको साथमा नव(विवाहित जोडीलाई बधाई दिन पुगेकी एलिजा आकाशे रंगको लेहेंगामा देखिएकी थिइन्, जसमा उनको सुन्दरता निकै खुलेको थियो ।
Previous: नेपाली कलाकारहरुलाई बडिगार्डको सुविधा, सुरक्षा घेरामा पुष्प र साम्राज्ञी
Next: दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, ‘गल्ती सच्याएर आउनुस्’